बालुवाटारसँगै देशभरि ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन, को हुन् प्रदर्शनकारी? :: Setopati
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं/पोखरा, जेठ २९
युवराज श्रेष्ठ काठमाडौं/पोखरा, जेठ २९
काठमाडौं, पोखरा, चितवन, धरान, वीरगञ्जलगायत देशका विभिन्न ३० सहरमा नागरिकस्तरबाट सरकारको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भयो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि सडकमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीका फोहरा र प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्दै गैरीधारामा अश्रृग्यास प्रहार गर्‍यो।
बालुवाटारमा प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा हान्दै प्रहरी। तस्बिर: सेतोपाटी।
महामारीका बेला जनताको ज्यान जोगाउने कुरा मुख्य भए पनि सरकार गफमा भुलेको उनले बताए।
‘क्वारेन्टिनमा मान्छे कोचाकोच राख्ने? विशेषगरी भारतबाट आएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राखिएको छैन किन?,’ उनले प्रश्न गरे।
सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीका उपचारमा खटिएका डाक्टरलाई पर्याप्त मात्रामा पिपिईलगायत अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध नगराएकोले पनि ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
यतिका भद्रोगोलका बीच सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा दश अर्ब खर्च भइसकेको बताएको छ।
‘दश अर्ब केमा खर्च भयो? हामीलाई पारदर्शी ढंगले हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूको एउटा मुख्य माग यो पनि हो,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने,‘जनताको पीडा एकातिर छ। खान पाएका छैनन्। किट अभावले परीक्षण रोकिएको छ। परीक्षण मेसिन छैनन्। सचेत युवा सरकारका ठूला कुरा र गफ सुनेर बस्न सक्दैन। त्यसैले लकडाउनबीच पनि सामाजिक दूरी अपनाएर विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति पनि नागरिकहरूलाई सडकमा उत्रिनु बाध्य पारेको उनले बताए।
बिहीबार चितवनको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्रीप्रति व्यंग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाले यस्तो प्लेकार्ड बोकेका थिए जसमा लेखिएको थियो- नो पिसिआर, नुन तेल बेसार, कोरोनाको उपचार: डा. केपी ओली!
चितवनको भरतपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्यंग्य गरिएको प्लेकार्ड बोकेकी प्रदर्शनकारी।
बिराटनगरको मध्य गर्मीमा युवा जोश।। pic.twitter.com/wvF41IH3La
— Suyesh राज (@Suyeshh) June 11, 2020
पोखरामा भएको प्रदर्शनको अन्त्यतिर राष्ट्रबैंक चोकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजीसमेत भएको थियो। नाराबाजीपश्चात प्रदर्शनमा उत्रिएका २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
मौन प्रदर्शन आयोजक समितिले भने नाराबाजीमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २९, २०७७, ०७:१९:००
संघीय सरकारविरूद्ध प्रदेश २ सरकारले गर्‍यो सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
रामचन्द्र पौडेलले गरे तनहुँमा पुल उद्घाटन